Tuesday June 19, 2018 - 14:06:54 in Wararka by
Ismaacii Hurre Buubaa oo horay usoo noqday Ra'iisal wasaare iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Federaalka ayaa sheegay in heshiiskii dowladda Itoobiya lala galay uu ahaa mid dhaxalgal ah isagoo Ra'iisal wasaaraha Itoobiya ugu hambalyeeyay in uu gaaray guul weyn sida uu hadalka u dhigay.
Buubaa oo warbaahinta lahadlayay ayaa carrabka ku dhuftay in Heshiiskan uu soo gaba gabeynayo colaad soo jireen ah oo u dhaxaysay Soomaalida iyo Itoobiyaanka "Heshiiskan wuxuu meesha ka saarayaa colaad soo jirtay shan boqol oo sanadood oo u dhaxaysay Soomaalida iyo Itoobiyaanka" ayuu yiri Buubaa.
"Ma'med Bin Zaayad maalintii koowaad ee Ciidda wuxuu ku tukaday Addis Ababa maalintii labaadna R/wasaaraha Itoobiya ayuu udiray Muqdisho,qorshuhuna wuxuu ahaa mid si aad ah loogasoo shaqeeye" ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ismaaciil Buubaa.
Abeey Axmed R'iisal Wasaaraha Itoobiya ayaa maalintii shalay sheegay in dalka Soomaaliya la hoos geyn doono Itoobiya islamarkaana dhaqaalaha iyo Baasaboorrada labada dal hal nidaam noqon doonaan.
Halkan ka degso Video ama Hoos Ka Daawo Buubaa oo afka furanaya